Waxbarashada Gabdhaha - Somalione
Fariin Noo Dhaaf
Shaqadeena Waxbarashada Gabdhaha
Gabdhaha Soomaaliya ku nool aad bay ugu hoseeyaan dhanka diwaangelinta dugsiyada. Sida badanaa dhacdana saami ahaan gabdhaha dhigta dugsiyada isku celcelis waa sedex dalool hal meel (1/3) degmadiiba. Si kastaba ha ahaatee, hadana aqoonta iyo waxbarashada waxay muhiim u tahay ka samata baxa saboolnimada iyadoo fursado xirfadeed la siinayo dadka dhibaatada u nugul si ay u helaan shaqo una helaan dakhli dhaqaale. Hadaba si looga hortago shaqo la’aanta baahsan ee haysata dalinyarta, khaas ahaan, gabdhaha soomaaliyeed , Somali One waxay la shaqeyn doontaa barnaamijyada waxbarasho ee haatan ka jira soomaaliya si loo dhiirageliyo ka qeyb qaadashada haweenka.
Somali One waxay sidoo kale la shaqeyn doontaa barnaamijyada aqooneed iyo waxbarasho ee caalamiga ah si loo hormariyo islamarkaana loo taabageliyo manhaj waxbarasho oo fursad u siinaya gabdhaha gaaray da’da dugsiga iyo kuwa kale ee dhalinyarada ahba fursad xirfad iyo aqoon oo tayo leh tasoo caawin karta iney shaqo helaan ama ka shaqeystaan ganacsiga reerka.
Taagerada dhanka waxbarashada ee gabdhaha Soomaaliyeed awadeed, Somali One waxay ka haqab tireysaa jiilka haweenka xirfadihii aqooneed iyo agabkii u sahli lahaa iney mareeyaan nolashooda islamarkaana hormariyaan maslaxadooda guud..
By supporting girls’ education in Somalia, Somali One will be equipping the next generation of women with the necessary skills and tools to earn a living and promote their overall well-being.
Soomaaliya horey ayay u socotaa!!! Mar kasta oo dadka shisheeyaha ahi ay maskaxdooda kusoo dhacdo Soomaaliya, waxaa u sawirma muqaal colaadeed, abaaro iyo burcad badeednimo. Laakiin maanta waxaa ka bilowday Soomaaliya hab-dhaqan ku dhisan maamul diimoquraadi ah, ku dhaqanka dastuurka iyo shuruucda dalka iyo ka qeybgelinta dadweynaha maamulka siyaasasadda. Hay’adda Somali One waxay damacsantahay iney dhidibada u adkayso horumarkaan dimoquraadiyadeed iyadoo lagu dhiiragelinayo dhammaan muwaadiniintu iney ka qeyb qaataan hanaanka siyaasada ee dalka. . Faahfaahin
Somali One waxay diirada saari doontaa la tashiga iyo ka qeyb galinta dhalinyarada iyo kobcinta kaalintahaweenka iyadoo la sameyn doono wacyi galin ku saabsan arrimaha muhiimka ah ee dhaqan-dhaqaale iyo siyaasadeed ee saameynta ku leh aqlabiyada shacabka soomaaliyeed. Faahfaahin
Somali One Videos
Govt Snubs AU on Maritime Row With Kenya August 24, 2019
Why Somalia Is At the Centre of the Qatar, Saudi Arabia Feuds August 23, 2019
President Framajo Appoints Former Warlord As Mogadishu Mayor August 23, 2019
Death Sentences Upheld for Child Rapists August 23, 2019
UN Envoy Lauds Reconciliation Efforts in Galmudug August 23, 2019
Mogadishu Gets New Mayor After Former Killed in Al-Shabaab Attack August 23, 2019
Regional Lawmakers Re-elect Incumbent as Leader Amid Tensions August 23, 2019
Britain Pledges Aid to Somalis Affected By Drought August 22, 2019
Somalia Made Economic Progress Amid Security Challenges, UN Envoy August 22, 2019
Jubaland Re-Elects President Ahmed Madobe a Third-Term in Office August 22, 2019
Somali One will focus on youth engagement andwomen’s empowerment while creating awareness around important socioeconomic and political issues that affect the majority of Somalis.
Copyright & SomaliOne.